SAWIRRO: Gudiga Sare ee Beesha Habargidir ee dhawaan la doortay oo Cadaado lagu soo dhaweeyay -News and information about Somalia
Home Warkii SAWIRRO: Gudiga Sare ee Beesha Habargidir ee dhawaan la doortay oo Cadaado...
SAWIRRO: Gudiga Sare ee Beesha Habargidir ee dhawaan la doortay oo Cadaado lagu soo dhaweeyay
Golaha Sare ee beesha Habargidir uu hogaaminayo Gudoomiyaha Gudiga beesha ee dhawaan la doortay ayaa gaaray Magaalada Cadaado.
Gudoomiyaha Beesha Habargidir Prof Abdulkadir Mohamed Shirwac ayaa wafdiga hogaaminayay waxana soo dhaweentiisa ka qeyb qaatay qeebaha kala duwan ee bulshada Cadaado.
Prof Shirwac ayaa la filayaa in uu kulamo la qaato bulshada Cadaado isagoo kala hadlay xaalada Galmudug iyo mida Beesha.
Warar Warkii Online ay heshay ayaa sheegaya in Gudoomiyaha uu ku wajahan yahay dhanka Caasimada Dhuusomareeb kulamada kadib.
Previous articleAgaasime ku xigeenka sirdoonka Qadar oo booqasho qarsoodi ah ku yimid Muqdisho
Next articleMaxkamadda ICJ oo faahfaahin cusub kasoo saartay dacwadda Badda ee Somalia & Kenya
Al-Shabaab Oo War Kasoo Saartay Qaraxii Maanta Lala Eegtay Injineero Turki...
DEG DEG: Qarax miino oo goordhow ka dhacay Muqdisho